लिम्वूवान - विविध सामग्री: नेपाली उत्तरआधुनिकता, मार्क्सवाद र सृजनशील अराजकता
नेपाली उत्तरआधुनिकता, मार्क्सवाद र सृजनशील अराजकता
समसामयिक नेपाली साहित्यमा उत्तरआधुनिकताका विषयमा खुबै विमर्श बनाउने प्रयत्न भइरहेको पाइन्छ । नेपाली साहित्यमा उत्तरआधुनिकताको धारणालाई भित्र्याउने प्रथम चिन्तक दार्जिलिङका इन्द्रबहादुर र्राई हुन् । उनले उत्तरआधुनिकतालाई उच्चआधुनिकता भनिकन नेपालीपन दिने प्रयत्न गरेका थिए । विषेशगरिकन इन्द्रबहादुर र्राई, बैरागी काइँला र इश्वरवल्लभ प्रक्षेपित आयामिक लेखन नेपाली आधुनिकताको भव्य प्राप्ति हो भने लीला लेखन उत्तरआधुनिकताको धारणा बोकेर आएको थियो । लीला लेखनलाई आयामिक लेखनकै विकसित रूप भनिकन प्रचारप्रसार पनि गरियो र विश्लेषण पनि गरियो । पछिल्लो समयमा बैरागी काइँलाले लेखेका केही कविताहरूमा उत्तरआधुनिकताका केही शिल्प र शैलीलाई समात्ने प्रयत्न गरेको पाइन्छ । उनको गङ्गा नीलो बग्छु-कवितामा पाइने संरचनागत विचलनलाई आधार मान्दा प्रथम उत्तरआधुनिक कवि बैरागी काइँला देखापर्छन् भने कठपुतलीको मन-कथामा इन्द्रबहादुर र्राईले सैद्घान्तिक आधारहरू समेत अग्रसर गराए । तर, उनीहरूले तीसको दशकमा गरेको यस्तो प्रयोगबारे कसैलाई अत्तोपत्तै भएन । भर्खर आधुनिकताले मस्तिष्क रन्थनाइरहेको बेला उत्तरआधुनिकताको माखेसाङ्लोमा नेपाली पाठकहरूलाई फसाउनु अत्याचारै हुन्थ्यो होला । तेसो र काइँला लिम्बू सँस्कृतितिर लागे, इन्द्रबहादुर र्राईले लीला लेखन भन्न थाले । लीला त पुर्वीय दर्शनशास्त्रबाटै उत्पत्ति भएको धारणा हो तेसैले कठपुतलीको मनलाई लीला भन्दा यताका पाठकहरूसित संवाद गर्न सजिलो होला भन्ठानेर उनले उत्तरआधुनिकताको नामै लिएनन् । तर हामीलाई लीला लेखन थाहा पाउन पनि दुइ दशकभन्दा धेरै समय लाग्यो । अन्ततः वि.सं. २०६३ सालमा इन्द्रबहादुर र्राईले लीला लेखनलाई उत्तरआधुनितावादकै कुनै शाखा भएको स्वीकार गरेछन् सिक्किममा ।
कठपुतलीको मनमा उनले लेखेका छन्- ...विनिर्माणवाद..बाट आधार र सकार लीलालेखनलाई प्राप्त । खेलौं बाँच्ने खेल, पात्रहरू पार्रदर्शक र सपाट छन् । उत्तरआधुनिक चिन्तक इहाब हसनले आधुनिकतावाद र उत्तरआधुनिकतावादमा पाइने फरकहरूलाई निम्नानुसार रेखाङ्कन गरेका छन् ।
उद्देश्य ----------------- खेल
कला बस्तु/पुर्ण कार्य ---प्रगति/प्रदर्शन/परिघटन
यस तालिकाबाट हिसाब गर्दा लीलालेखन नामाकरण गरिएको कठपुतलीको मन कथा-सङ्ग्रह) उत्तरआधुनिकतावादमा आधारित प्रथम नेपाली कृति देखिन आउँछ । तर, इहाब हसनले कोरेका प्रस्तुत फरकताहरू या उत्तरआधुनिकताका विषेशताहरू सारसङ्क्षेप हो । उत्तरआधुनिकतावादको कुनै संयुक्त सिद्घान्त छैन । आ-आफ्नो भूगोल, आ-आफ्नो स्वार्थ, आ-आफ्नो सुविधा, आ-आफ्नो कोणबाट यसको व्याख्या तथा प्रयोग हुँदैआएकोले उत्तरआधुनिकतावादको रूप यही नै हो भनेर किटान गर्नु हास्यास्पद हुन्छ । अमेरिकन उत्तरआधुनिकता र अप्रिकन उत्तरआधुनिकतामा भिन्नताहरू छन्, युरोपियन उत्तरआधुनिकता र एसियन उत्तरआधुनिकतामा समानता पाइँदैनन् । फ्रेन्च उत्तरआधुनिकता र जर्मन उत्तरआधुनिकतामा तेस्तै फरकता भेटिन्छ । नेपाली परिवेशको सर्न्दर्भमा भन्ने हो भने नेपाली उत्तरआधुनिकता भनेको उपेक्षित तथा उत्पीडित, शोषित तथा दमित जीवनको उत्थानका निम्ति निर्मित सप्पै नश्ल र चेतनाहरूको समन्वयले विकसित नयाँ परिस्थितिको विचारप्रणाली हो, हुनुपर्छ । उता अमेरिकन र युरोपियन उत्तरआधुनिकताका स्थितिहरू यता नेपालको स्थितिसित मिल्दैन । नेपालमा उत्तरआधुनिकतालाई इन्द्रबहादुर र्राईले नेपाली सामाजिकता अनुसार लेखे । कतिपय विद्वानहरूले चाहिँ उता युरोप अमेरिकातिरकै जस्तो उत्तरआधुनिकता सारेका छन् । जसले गर्दा भ्रान्तिहरूले व्याप्ति पाएका छन् । गाउँ नै गाउँले बनेको नेपालमा शहरी उत्तरआधुनिकताको खेती गर्दैछौं जसले गर्दा एककिसिमको विरोध खेपिरहेका छौं । उत्तरआधुनिकतालाई गाउँले अथवा दुर्गमताको सापेक्षमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । हिजोको स्थिति र आजको स्थितिमा धेरै भिन्नताहरू छन्, हुन्छन् । पहाड खिइँदैखिइँदै आइरहेको छ, गाउँले जीवन हिजोको जस्तो छैन । यौटा सय रूपियाँको खासाको रेडियोले गाउँलेहरूको सोच्ने शैली र चिन्तन व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन ल्याइदिएको छ । आजको गाउँ सूचना र क्रियाशीलताले गर्दा अत्यन्तै चुस्त बन्दैछ । यो स्थिति या अवस्थालाई उत्तरआधुनिकता भनौं या अरू केही, हिजोका परम्परा र परिभाषाहरू निश्चय नै भत्केका छन् ।
नेपालमा उत्तरआधुनिकताको धेरै विरोध हुनुको कारण हुबहु उता पश्चिमा उत्तरआधुनिकतावादलाई यता प्रतिस्थापन गर्न खोज्नुले नै हो । विषेशगरिकन नेपालका परम्परागत कम्युनिष्टहरू उत्तरआधुनिकतावादको प्रखर रूपमा विरोध गर्दछन् भने लिबरल र डेमोक्र्याट्सहरू अमेरिकन र युरोपियन उत्तरआधुनिकतावादको र्टाईमा झुन्डिरहेका देखिन्छन् । यिनीहरूको आ-आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ छ । मार्क्स, एङ्गेल्स, लेनिन, माओ, ग्राम्सी आदिइत्यादि कम्युनिष्ट विचारकहरूका -तथाकथित अकाट्य विचारहरूमाथि उत्तरआधुनिकतावादका नाममा नवसाम्राज्यवादीहरूले वैचारिक आक्रमण गरेको पत्याउँछन् नेपालका कम्युनिष्टहरू । लिबरल र डेमोक्र्याट्सहरू भने उत्तरआधुनिकतावादको वैचारिक भ्रम फैलाएर उपेक्षित र उत्पीडित, शोषित तथा दमितहरूको आवाजलाई सुनेझैं अभिनय गर्दै नसुन्ने गरिरहेका छन् । विश्वमा उत्तरआधुनिकतावादका प्रवक्ता र प्रस्तावकहरूमा मार्क्सवादी लेखकदार्शनिकहरू अगाडि छन् । फ्रेडरिक जेम्सनले 'postmodernsim or the cultural logic of late capitalism 'मा र डेभिड हार्भेले ' postmodern condition 'मा मार्क्सवादले आजको अवस्थामा कसरी आफूलाई विकसित गरेको छ भन्ने कुरा लेखेका छन् । मार्क्सवादको विकसित रूपलाई उत्तरआधुनिकतावाद भनेर व्याख्या गर्दा कम्युनिष्टहरू आयामिक भएका छन् । तर, उता कट्टरवादी या परम्परावादी कम्युनिष्टहरू भन्छन् जब कम्युनिष्टहरू आयामिक हुन्छन् तब उनीहरू कम्युनिष्ट रहँदैनन् अरू केही हुन्छन् । लगभग दुइ सय वर्षअगाडि मार्क्सले साँङ्लाले बाँधेका दासहरू देखे, हातमा कोर्रा बोकेका मालिकहरू देखे र तेसै अनुरूप कम्युनिष्ट दस्तावेज तयार पारे । जहाँ उनले दासहरू या कामदार वर्गको मुक्तिका लागि सिद्घान्त बनाए । कामदार वर्गलाई मानवीय व्यवहार गरिनुपर्ने, उनीहरूको श्रमको उचित मूल्य दिनुपर्ने लगायत राज्यसत्तामा र्सवहारावर्गको पनि हिस्सा हुनुपर्ने कुराहरू उठे । आज कामदार वर्गका हातखुट्टाबाट फलामका साँङ्लाहरू फुस्किएका छन्, मालिकका हातमा छालाका कोर्राहरु छैनन् । तर, पुँजीवादको नयाँ रूपले आफ्नो शोषणको रूप पनि फेरेको छ । आफैले बनाएको थोक आफैले उपभोग गर्न नपाउने स्थिति छ । ठूलाठूला शहरमा मजदुरी गर्नेहरूको जीवनशैली हिजोकै कुनै दासकै जस्तो छ भने यस्ता शहरका 'टाइकून'हरूको जीवनशैली हिजोकै कुनै मालिकको जस्तो छ । रूप मात्रै फेरिएका छन् तर सारसङ्क्षेप उही छ । हङकङकै सर्न्दर्भमा यहाँका मानिसहरू अग्लाअग्ला घरहरूबाट हाम्फाल्दै आत्महत्या गरिरहेका छन्, दिनै कोही पागल भइरहेको छ । कारण के हो ? यहाँको स्थानिय सरकारले पनि आत्मसात् गरेको छ कि यसप्रकारका घटनाहरू आर्थिकताले सामाजिक जीवनप्रक्रियामा खडा गरेको जटिलताले घट्दछन् । हङकङमा मजदुरहरूको काम गर्ने समय अधिकतम छ । जसले गर्दा अन्य क्रियाकलापबाट वञ्चित हुनुपर्छ उसले । उसको जीवन काममा जाने र सानो चारफिटे कोठामा फर्किने बाहेक अरू खासै हुँदैन । शरीरलाई आवश्यक आराम पनि चाहिन्छ । यो कुरा यहाँको सरकार र बिजिनेस टाइकूनहरूले बुझ्नु जरूरी छ । धेरै काम गराएर धेरै नाफा कमाउन चाहन्छन् यहाँका कम्पनीहरू भने सरकार पनि धेरै कर उठाउन चाहन्छ । जब हाम्रो काम गर्ने समय १२ या १० घण्टाबाट ८ घण्टामा र्झछ तब उत्पादन घट्छ । उत्पादन घट्दा नाफा घट्छ, कर घट्छ । तेसकारण केही सिमित व्यक्तिहरूको नाफाका निम्ति हङकङका मजदुरहरू मेशिनजस्तै खटिरहेका छन् र यो खटाइबाट उचित मूल्य पनि पाइरहेका छैनन् । तीन महिना काम गरेन भने हामी सडकमै आइपुग्छौं । यहाँका वरिष्ठ नागरिकहरूले पेन्सनपछि पनि काम गरिरहेको देखिन्छ । यसलाई बाध्यता भनौं या पुँजीवादी व्यवस्थाको घिनलाग्दो अनुहार, आखिर शोषण या उत्पीडनको रूप मात्रै फेरिएको रहेछ । मार्क्सवादी विद्वानहरू यो बद्लिएको अवस्थालाई उत्तरआधुनिकतावाद भन्दछन् ।
मेरो अघिल्लो आलेख खुला समाजको पक्षमा मा उत्तरआधुनिकताले नेपालमा बुन्न खोजेको चेतनामण्डल बारे थोरै चर्चा गरिसकेको छु । फेरि पनि तेसलाई अरू व्याख्या गर्नु आवश्यक छ । उत्तरआधुनिकतालाई कसरी बुझिरहेका छौं र बुझ्नुपर्ने कसरी ? सम्भवतः प्रस्तुत विचारले सहयोग गर्ला । नेपाली उत्तरआधुनिक अभियन्ताहरू कुकुर र बिरालोलाई साहित्यका विषय बनाइरहेका छन्, मानिसलाई बोका र माउसुलीमा रूपान्तरण गरिरहेका छन् । यौटा सिङ्गो मानवजाति लोप हुने स्थितिमा छ तर नेपाली चिन्तन गैंडा लोप हुन लाग्यो भनेर रूवाबासी गर्दैछ (हेर्नु अन्तरवार्ता बैरागी काइँला) । पशुपङ्क्षी र रूखविरूवाका विषयमा लेख्नु नराम्रो होइन तर नेपालका पिछडिएका र लोप हुने स्थितिमा रहेका मानवजातिहरूलाई नै अवमूल्यन गर्ने काम गर्नु हुँदैन । तेसोर नेपाली उत्तरआधुनिकतावाद भनेको नेपालका सप्पै जातिहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने विकास, उन्नति र प्रगतिको साझा विचारप्रणाली हो । विकसित मुलुकहरूमा निश्चय नै पशुपङ्क्षी र रूखविरूवाका हक अधिकारका बारेमा कार्यक्रमहरू हुन्छन् तर त्यहाँ मानवजातिलाई उपेक्षा गरिएको हुँदैन । उत्तरआधुनिकताका नाममा जरूर हामी पशुपङ्क्षी र रूखविरूवाका हक-अधिकारका कुराहरू पनि गरौं तर नेपालमा पिछडिएका मानवजातिहरूलाई बिर्सेर होइन, उनीहरूलाई पनि समान हक-अधिकार, अवसर र सुविधा दिएर । यौटा मानव भोकै छ भने यस्तो अवस्थामा कुकुरलाई बिस्कुट खुवाएर पशुजीवनको सम्मान गरेको गर्व नगरे हुन्छ । राज्यले यो कुरा नबुझेसम्म नेपालको उन्नति र प्रगति असम्भव छ । सृजनशील अराजकताले अघि सारेको नेपाली उत्तरआधुनिकतावादको रूपरेखामा मानवजाति पहिलो र्सत हो, पशुपङ्क्षी र रूखविरूवा दोश्रो र्सत मात्रै हो, यन्त्रहरूको अध्ययन तेस्रो र्सतमा छ । लीलालेखनले प्रक्षेपण गरेको नेपाली उत्तरआधुनिकतावादको क्यान्भासमा छुटेको कुरा यही हो । लीलाले आफूलाई सच्याएर अघि बढ्न सक्छ । निरङ्कुश व्यवस्थाले जातीय अहङ्कारलाई महत्व दिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले जातीय चेतनाको विकास गर्छ र सम्मान गर्छ । र, यो जातीय चेतना या नश्लीय चेतनाबिनाको उत्तरआधुनिकतावाद नेपालको सामाजिक संरचनामा स्वीकृत हुँदैन । तेसैले उत्तरआधुनिकतावादका नेपाली संवाहकहरूलाई सुझाव दिन्छौं- जातीय चेतना/नश्लीय चेतनालाई इन्कार गरेर उत्तरआधुनिकतावादको खेलमैदानमा उत्रिनु आफैमा आत्मघाती निर्णय हो । जातीय चेतनालाई सम्मान गर ।
नेपालमा उत्तरआधुनिकतावादका सामाग्रीहरू थोरै मात्र उपलब्ध हुन्छन् । तेसमा पनि मौलिक दस्तावेजहरू त मुश्किलले मात्रै मिल्छन् । यसो हुँदा हामी दोश्रो या तेश्रोचोटि अरूद्वारा व्याख्या गरिएको उत्तरआधुनिकतावाद पढिरहेको हुने भएर पनि कतै गलत दिशातिर हिँडिरहेका हुनसक्छौं । फेरि उत्तरआधुनिकतावाद साहित्यको मात्रै होइन अन्य शास्त्रहरूको पनि चासो हो । राजनीतिशास्त्र, मानवशास्त्र, विज्ञान, कला, आर्किटेक्चर, दर्शनशास्त्र, व्यवस्थापन सबैसबैमा उत्तरआधुनिकतावादका स्थितिहरू विचार गरिएका छन् । नेपालमा यो चिन्तनले सकारात्मक प्रभाव तब मात्रै पार्ला जब हामी यसमा नेपालीपन मिलाउँछौ । र, यो नेपालीपन भनेको माथि नै भनिए झैं जातीय चेतनाले निर्माण हुने नेपालको सामाजिक विविधता, साँस्कृतिक समन्वय, अवसर र न्यायको समान वितरण, लोपोन्मुख मानवीय जातिको उत्थानप्रति प्रतिबद्घता, प्रतेक नश्लहरूको सम्मान, प्रतेक अस्तित्वहरूको मूल्य नै हो । यी विषेशताहरूले उनिएको उत्तरआधुनिकतावाद नेपाली उत्तरआधुनिकतावाद हो । उत्तरआधुनिकतावादको आयात अमेरिका र युरोपबाट नै गरिराख्नु आवश्यक छैन । केही नट र बल्टु ल्याउन सकिन्छ, केही पाटपुर्जा ल्याउन सकिन्छ तर उत्तरआधुनिकतावादको जुन मुटु र मस्तिष्क छ त्यो चाहिँ नेपाली समाजबाटै राख्नुपर्छ । सम्भवतः नेपालका विद्वान लेखक तथा प्राध्यापकहरूले व्याख्या गर्ने गरेको उत्तरआधुनिकतावाद र सृजनशील अराजकतामा हामीले व्याख्या गर्ने गरेको उत्तरआधुनिकतावादमा यही मूलभूत भिन्नता छ । इन्द्रबहादुर र्राईसित भने थोरै मिल्न खोज्छौं । किनभने कठपुतलीको मन कथाको अन्त्यमा उनले केही मुक्तिका आवाज उरालेका छन् । कुनै स्वार्थले हामीमा खाँदेको धारणाबाट मुक्ति अथवा आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाको पक्षमा वकालत/ अर्थात् सृजनात्मक निर्णय। नेपाली साहित्यका यी महान् स्रष्टा लेख्छन्- उम्कौं कि जीवनबाट - लीलाबाट । गङ्गा नीलो बग्छुबाट । आगोका फूलहरूबाट । उभिएको कसैको चाहना नबोकी त्यो पर्वत-उभिएको कसैको थाह नबोकी-बनौं । अर्थ चिप्ला लेउ, धारणा धुजिंदा खिया, दागैदाग इतिहास-उम्कौं कि जीवन नाउँको यतिञ्जेल ओढिराखेका यी थाङ्नाभोटाबाट -
Posted by limbu at 6:03 PM